महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको प्रस्ताव, बन्लान् त नयाँ प्रधानमन्त्री ठाकुर ? – Interview Nepal
महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको प्रस्ताव, बन्लान् त नयाँ प्रधानमन्त्री ठाकुर ?
March 13, 2021 March 13, 2021 by China Regmi
काठमाडौं , फागुन २९ । जनता समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको जसपाको संयुक्त संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सांसदमध्ये आधाजसोले यसपटक जसपा आफैंले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएमा जसपाले ठाकुरलाई अघि सार्ने पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन् ।
जसपाका नेताहरूले बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि जसपाले सरकारको नेतृत्वको विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको हो । ठाकुरनिकटका जसपा नेता डा। सुरेन्द्र झाले भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुरलाई घुमाउरो भाषाबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ।
Tagged महन्थ ठाकुर